Jaamacada Culuumta Caafimaadka ayaa Xaflad Soo Dhaweyn ah u qabatay Ardayda Sanadkan Ku Soo Biirtay Jaamacada.(Sawirro) – University Of Health Science Basao somalia
Written by Mohamed Dini on 12th October 2018 in English, featured, University Life, Wararka
Jaamacada Culuumta Caafimaadka Ee Magaalada Boosaaso Ayaa Shalay Galab Xaflad Balaaran Gudaha Jaamacada oogu qabatay Ardayda Sanadkan Ku Soo Biirtay Jaamacada oo aheyd 650 arday.
Jaamacada ayaana agaasintay xaflada waxaana ka soo Qeybgalay xafladaa Maamulka jaamacada,Macalimiinta iyo Howl wadeena jaamacada iyo ardayda sanadkan 2018/2019 ku soo biirtay iyo waalidiintooda oo jaamacada joogay.
sidoo kale ardada cusub waxaa dhiirigalinayay oo ka soo qeyb galay xaflada shirkadaha kala ah.Amal Bank,Somtel,Salaam Bank iyo Asal Jet Dhamaantoodna mas,uuliyiintii u hadlayay waxay aradada cusub u sheegeen in ay nasiib leeyihiin oo ay ku soo biireen jaamacad tayo Waxbarasho oo wanaagsan Leh iyo aqoonsiyo caalami ah haysato oo ah jaamacada culuumta Caafimaad.
Gudoomiye Ku xigeenka Jaamacada Culuumta Caafimaadka Ee Academic Dr Axmed Hassan Mohamed Nour ayaa ardada cusub kula Dardaarmay in ay Hadafkooda Waxbarasho ay ka Dhameeyaan jaamacadana ay ka helayaan waxbarasho wanaagsan.
Sidoo Kale Gudoomiye Ku Xigeen Jaamacada Culuumta Caafimaadka Ee Adminka ENG.Abdirashiid Yusuf Mahad ayaa ardada cusub ku soo dhaweeyay jaamacada oogana war bixiyay Heerka ay jaamacada joogto oo ah Mid Sare oo leh waxbarasho tayo wanaagsan jaamacadana ay xooga saarto Taqasuska Caafimaadka.
Qaar ka Mid ah ardada cusub oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay jaamacada Culuumta Caafimaadka ku doorteen waxbarashada wanaagsan ay bixiso ayna soo arkeen dadkii jaamacada ka baxay oo hayo shaqooyinka oogu horeeyo ayna tahay Jaamacad lagu kalsoonyahay.